Ifulethi elithokomele enkabeni-wifi-smartTV-PARKING AVAIL
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Bruna
KUSUKELA SEPTEMBRE 2019:
-INDAWO YOKUPAKA EZISEMELE IYATHOLAKALA NGENKOKHELO ENGEZIWE!
-NEW SMART TV LG 50”
-I-WI-FI ye-ADSL NGAPHANDLE KOMKHAWULO WOKULANDA
-OMAMATILASI EMIBHEDE ABABILI ABASHA
(indlu ye-turistic N. IP0250160797)
Ifulethi lethu lisesitezi sesi-4 sesakhiwo esihlonishwayo esisenkabeni yeCortina, ngaphansi kwamamitha ayi-100 ukusuka kwinsimbi engumbhoshongo yeSonto laseCorso Italia. Ilungele izivakashi ezingu-6, amagumbi okulala amabili angu-3, amagumbi okugeza angu-2, ikhishi, inketho yokupaka.
Ifulethi lethu lise-"Largo delle Poste" esitezi sesine sesakhiwo esihlonishwayo. Kumafasitela akhona kanye nakuvulandi ungajabulela ukubuka okuhle kwe-“Croda ca lago” “ne-Becco di Mezzodì” eningizimu, Iqembu le-“Sorapis” empumalanga kanye ne-“Tofane” ngasentshonalanga. Imizuzu emibili uhamba ngezinyawo ukusuka emigoqweni ekhetheke kakhulu nezitolo, 300m ukusuka emotweni yekhebula le-ski yaseFaloria-Crystal.
Konke mayelana nefulethi lakho:
Ifulethi lilungele abantu abangu-6.
Hlala: uphelele ngendawo yokudlela, ikhabethe, i-SMART TV, i-inthanethi i-Wi-Fi, izihlalo zengalo kanye nosofa.
Ikhishi elinefriji-isiqandisi, umshini wokuwasha izitsha, ikhishi elinohhavini, ihhavini ye-microwave, i-extractor hood, izisekelo nama-hangers, itafula lokususa (itafula lesidlo sasekuseni).
Amakamelo okulala (3): igumbi eliphindwe kabili elinovulandi wokungena, igumbi lokulala elinemibhede emibili yabantu abangashadile, igumbi lokulala elinemibhede emibili kanye negumbi lokugezela langasese. Wonke amakamelo ane-wardrobe.
Amagumbi okugeza (amabili) aqeda zonke izinsiza, izesekeli, ukugeza noma ishawa.
I-balcony enokufinyelela kusuka egumbini lokuphumula kanye negumbi lokulala elikhulu.
Ifulethi lilethwa liphelele nefenisha, i-kitchenware, umshini wokugeza izitsha, umshini wokuwasha kanye nempahla.
OKUSHA: Ifulethi lifakwe egumbini elingaphansi kanye negumbi lokugcina impahla esitezi esiphansi, eliwusizo ukufaka izinto zokushushuluza.
4.78 ·42 okushiwo abanye
4.78 · 42 okushiwo abanye
I-Cortina D'Ampezzo, elinye lamadolobha adume kakhulu emhlabeni, ilele esigodini esiluhlaza esizungezwe iziqongo ezidume kakhulu zepaki i-dolomite bellunesi.
Ukuhamba ngezinyawo e-Corso Italia, nomaphi lapho kwaziwa ngobuhle nokukhethekile kwezitolo zayo, kuqala ukuthatha njengereferensi yeBandla kanye nensimbi yalo edumile yombhoshongo.
Ngalezi zici, i-Cortina iyindawo ekahle yeholide elihle neliyingqayizivele: ebusika ngenxa yemithambeka yayo emihle nedumile yokushushuluza eqhweni nasehlobo lokuhamba izintaba, kulula noma isibindi, endaweni eyingqayizivele emhlabeni.
Umsingathi ngeke abe khona endlini, kodwa sizokwenza konke okusemandleni ethu ukwenza ukuhlala kwakho kungalibaleki.
Uzosizwa futhi usizwe abantu bendawo ababambisene nathi.
**ISAZISO ESIBALULEKILE: Ukuze sihambisane nomthetho wase-Italy osibophezela ukuthi sidlulisele imininingwane yazo zonke izihambeli zethu kuziphathimandla zendawo (kanye namahhotela), kuphoqelekile ukuthi usithumele, ezinsukwini ezimbalwa ngaphambi kokuqala ukuhlala, isithombe sepasipoti noma umazisi wazo zonke izivakashi.
Uzosizwa futhi usizwe abantu bendawo ababambisene nathi…
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$794.